पोल्यान्डमा हराएको नेपाली पासपोर्ट सम्बन्धि निरन्तर सोधिने प्रश्नहरु | "हरेक घरमा धारो होस्, हरेक गाउँमा सिंचाइ होस्"
पोल्यान्डमा हराएको नेपाली पासपोर्ट सम्बन्धि निरन्तर सोधिने प्रश्नहरु
February 21, 2021 by POLAND NEPAL
राहदानी हरायो, के गर्ने ?
राहदानी हराएमा नयाँ राहदानी लिनु पर्दछ ।यसका लागि नयाँ राहदानी बनाउदा अपनाउन पर्ने सम्पुर्ण प्रक्रिया अपनाउनु पर्दछ । यसका लागि अतिरिक्त दस्तुर तिर्नु पर्दछ । नेपाली दूतावास जर्मनी बर्लिनमा २४० युरो तिर्नुपर्दछ । नेपाली दूतावासको वेबसाईटमा राखेको सूचना अनुसार पुलिस रिपोर्ट पनि बनाउने भनेको हुदा पोल्यान्ड प्रहरीले जहातही हत्तपत्त रिपोर्ट बनाउन नमान्ने हुदा एक पटक नेपाली दूतावास जर्मनी बर्लिन 00493034359920 मा सम्पर्क गरेर दूतावासको नियम अनुसार फलो गर्ने । एम आर पि पासपोर्ट हरायो भने तपाइको हराएको कागजात नम्बर इन्टरपोलमा नै राख्ने हुदा पुलिस रिपोर्ट बनाउन गार्हो भएको अवस्थाको निवेदन लेखेर पठाउनु पर्छ ।
राहदानी हराएमा कति अतिरिक्त दस्तुर तिर्नु पर्दछ ?
राहदानी हराएमा नेपालमा रु ५००० अतिरिक्त शुल्क तिर्नु पर्दछ । विदेश स्थित नेपाली नियोगहरुको हकमा दोब्बर दस्तुर तिर्नु पर्दछ । जस्तो पोल्यान्डको हकमा जर्मनी दुताबासमा २४० युरो प्लस कुरिअर चार्ज तिर्नुपर्छ । वा आफै कसैलाई पठाएर वा कुरिअर पठाएर पनि पासपोर्ट कागजात मगाउन सकिन्छ ।
राहदानीमा भएको विवरणमा त्रुटी देखिएमा के गर्ने ?
राहदानी छपाइ हुँदा कुनै त्रुटी भएमा नयाँ राहदानी जारी हुन्छ । यदि विभाग/कार्यालयको गल्तीका कारण फाराममा भएको विवरण भन्दा राहदानीमा छापिएको विवरण फरक परेमा तुरुन्त दूतावास बर्लिन 00493034359920 मा सम्पर्क गर्ने । अन्यथा दस्तुर लाग्ने हुन्छ फोटो खिच्दा गहना लगाउन मिल्छ ?
सामान्यतः फोटो खिच्दा घाँटी र घाँटीभन्दा माथिका सवै गहना फुकाल्नु पर्दछ । तर सँधै लगाउने र गहनाको कारण व्यक्तिको प्राकृतिक स्वरुपमा कुनै फरक नपर्ने किसिमका साना आकारका गहना (जस्तैः नाकमा लगाउने सानो फुली) लगाउन सकिन्छ ।
के राहदानी नविकरण गर्दा पुरानो नम्वरकै राहदानी बन्दछ ?
होईन, राहदानी नविकरण गर्दा नयाँ नम्वरको राहदानी बन्दछ ।
मेरो राहदानीमा भिसा छ नविकरण गर्दा के हुन्छ ?
राहदानी नविकरण गर्दा नयाँ राहदानीमा पुरानो राहदानीको नम्वर आउने भएकोले सामान्यतः पुरानो राहदानीमा भएको भिसाको आधारमा भ्रमण गर्न सकिन्छ । यो विषय भ्रमण गर्ने मुलुकको नियममा निर्भर गर्ने भएकोले जुन मुलुकको भ्रमण गर्ने हो सो मुलुकको आधिकारीक निकायसँग बुझ्नु राम्रो हुन्छ ।
राहदानी हरायो, के नेपालमा पत्र पत्रिकामा सुचना दिनु पर्दछ ?
पर्दैन । राहदानी हराएमा पत्रपत्रिकामा सूचना ननिकाले तापनि वा प्रहरी प्रतिवेदन नभएता पनि राहदानीका लागि आवेदन दिन सकिन्छ । विभागले हराएको राहदानीलाई रद्ध गरेको सूचना Interpol लाई दिने व्यवस्था छ ।
.मैले राहदानी हरायो भनी नयाँ राहदानी बनाएँ । तर पछि पुरानो राहदानी भेटियो, के गर्ने ?
हराएको राहदानी भेटिएमा जुन स्थानवाट राहदानी वनाइएको हो, त्यहाँ सम्पर्क गरी राहदानी रद्ध गराउनु पर्दछ । हराएको राहदानी भेटिएतापनि पनि यसको अभिलेख सम्बन्धित निकायहरुमा पठाइने भएकोले त्यस्तो राहदानी लिइ यात्रा गर्न मिल्दैन ।
हराएको राहदानी लिई यात्रा गरे के हुन्छ ?
हराएको राहदानी लिई यात्रा गरेमा सम्बन्धित मुलुकको अध्यागमन नियम अनुसार कारवाही हुन्छ ।
कुनै पनि होटेल रिजरभेसनको लागि http://www.meroreservation.com
← पोल्यान्डमा बच्चाको लागि प्रति महिना प्राप्त हुने ५०० ज्लोटी अनलाइन निवेदन आफ्नो ब्यान्क अप्लिकेसनबाट पनि दिन सक्नुहुन्छ है ।
के हो पि सि आर टेस्ट →